Ukubuyekezwa kwe-FXOpen Broker - Kumele Ufunde! Ingabe i-FXOpen i-Safe Forex Broker
Ikhaya Forex Broker Izibuyekezo Ukubuyekezwa kwe-FXOpen Broker – Kumele Ufunde! Ingabe i-FXOpen i-Safe Forex Broker
2 Inkundla yokuhweba ye-FXOpen
4 Ukushintshanisa okungcono kakhulu kwe- FXOpen
6 Indlela Yokukhokha Ye-FXOpen
8 Izinzuzo Nezingozi Ze-FXOpen
9 Ukuphepha & Ukuphepha Kokusebenzisa i-FXOpen
10 Amazwe Amukelwayo
11 Isinqumo Sokugcina
I-FXOpen ingumthengisi we-Forex othengisa ovumela abadayisi abancane ukuthi bafinyelele emakethe, naphezu kwesimo sabo sezimali ngokuqondile. Igxile ekufakweni okuphelele ngokuhlinzeka ngama-akhawunti okuhweba abathengisi abangawathola kuphela a $1 idiphozi. Yasungulwa ekuqaleni njengesikhungo semfundo esihlinzeka ngezifundo zokuhlaziya ubuchwepheshe kanye nezimakethe zezimali. Ukuhamba ngokuvumelana nokugeleza kwenqubekelaphambili, I-FXOpen iqale ukuhlinzeka ngezinsizakalo zayo zokuthengisa ngonyaka 2005 futhi ilokhu ikhula ibe yinkampani ye-Forex ephumelelayo ngaphakathi kwemakethe yokudayisa.
Inkundla yokuhweba ye-FXOpen
Kubathengisi abafuna ukuhweba okufinyelelekayo, I-FXOpen ingumthengisi ongcono kakhulu we-Forex abangawusebenzisa. Iza nezinkundla ezintathu ezahlukene zokuhweba, kuhlanganise MetaTrader 4, I-MetaTrader 5, kanye ne-Web Trader. MT4 futhi MT5, Ngokwesinye isandla, iza nohlelo lokusebenza oluhambisanayo lweselula olutholakala kubo bobabili abasebenzisi be-smartphone be-Android ne-iOS. Kodwa uma ufuna ukufuduka kuhlelo lokusebenza lwedeskithophu evamile uye kuwebhu, iWeb Trader ilungele wena.
I-MT4 iphakathi kwamapulatifomu okuhweba aziwa kakhulu akhona ama-Forex brokers. Kukhona ngaphezulu 70% abathengisi abahlinzeka nge-MT4 kumakhasimende abo, futhi mayelana 90% Ukuhwebelana kokuhweba emakethe ye-Forex kwenziwa kusetshenziswa i-MetaTrader 4. Inguqulo entsha yale nkundla yi-MT5, eza nemisebenzi emisha evuna wonke umhwebi we-Forex.
I-FXOpen ihlinzeka ngokuyinhloko ngenhlobonhlobo yama-akhawunti okutshalwa kwezimali, okuhlanganisa nama-CFD, Ama-akhawunti wokuhweba we-Crypto, Izinkontileka ezincane, I-STP, Ama-akhawunti edemo, kanye nama-akhawunti e-ECN. I-STP idinga u-£100 njengediphozithi encane, kuyilapho ama-akhawunti edemo evumela abaqalayo ukuthi bafunde ukuhweba ngaphambi kokuhweba okwangempela.
Ngaphandle kwalokhu, I-FXOpen inikeza okungaphezu koku 52 currency ngazimbili, futhi inikeza cishe amathuluzi e-CFD ayishumi nambili. Uma kukhulunywa ngamapheya e-cryptocurrency, bangu 43 amapheya abadayisi abangawasebenzisa. Abahwebi bangakwazi futhi ukufinyelela amathuluzi okuhweba ambalwa kwa-FXOpen, njengezitoko, indices, yezimbiwa, izinketho, kanye nezabelomali.
Ukushintshanisa okungcono kakhulu kwe- FXOpen
Isilinganiso yikhono lokusebenzisa into encane ukulawula inani elibaluleke kakhulu. Ku-FXOpen, isilinganiso ku-ECN ne-STP siphezulu 1:500. Okwe-crypto, lindela amandla okuthi 1:3 futhi 1:500 okweMicro.
I-FXOpen inikeza izinketho ezimbalwa zamanani uma kuziwa ekukhomishinini nasezinkokhelweni. Intengo incike ohlotsheni lwe-akhawunti yomthengisi, njenge-STP, I-ECN, kanye ne-Micro, kodwa amanani ayo, ngenjwayelo, iwela esilinganisweni semboni.
Ukusabalala kuvame ukucinana, ngokuqala kwe 0 amapipi. Nge-akhawunti ye-ECN, izimali eziqoqwe zisukela 0.3 uku 1.0 pips zonke 1 million, kodwa amanani nawo ayashintsha ngokuya ngevolumu edayiswe enyangeni eyandulele.
Kuma-akhawunti e-STP, ukusabalala kuvame ukuncika ezintweni ezahlukene, okuhlanganisa nemali yemakethe. Esimweni esinjalo, izimali zilungisiwe.
Indlela Yokukhokha Ye-FXOpen
Bonke abathengisi be-FXOpen bangakhetha ekukhetheni okubanzi kwezinketho zokukhokha. Bangakwazi ukufaka idiphozi noma bahoxise Ngamakhadi Esikweletu/Edebhithi, I-Bank Wire Transfer, I-Neteller, I-SkrillMoneyBookers, I-WebMoney, SEPA, kanye ne-Payza.
Ukwenza ukuhweba kube ngcono, I-FXOpen inikeza amabhonasi ahlukene nokukhushulwa abadayisi abangakuthola kalula ngokubhalisa i-FXOpeneWallet nokuvula i-akhawunti yokuhweba yangempela.. Abahwebi bangathola ithuba lokuthola amabhonasi emali yangempela kanye nethuba lokukhokha inzuzo, njengokulandelayo:
Ayikho ibhonasi yediphozithi yabahwebi abanama-akhawunti e-STP
Ibhonasi Yokwamukela yabahwebi abahlangabezana nediphozithi encane
Ibhonasi Yomncintiswano Wokuhweba we-ForexCup enani kuye ngemibandela yomncintiswano
Umthengisi we-Forex futhi unohlelo lokubuyisela imali oluvumela abadayisi ukuthi bathole imbuyiselo eyengeziwe yanoma yiluphi uhlobo lokulahlekelwa njengokwenza.. Imbuyiselo yemali izofakwa ku-akhawunti yakho yeKhomishini ezivula ngokuzenzakalelayo ngaphandle kokwenza ngisho lutho.
Izinzuzo Nezingozi Ze-FXOpen
Inzuzo engcono kakhulu yalo mthengisi we-Forex ukwesekwa kwayo kwamakhasimende okuhle kakhulu okuhlinzeka ngengxoxo ebukhoma 24 amahora njalo phakathi neviki. Iza ne-akhawunti yedemo evumela abaqalayo ukuthi bafunde inkundla kuqala ngaphambi kokuhweba okwangempela. I-FCA, kanye nezinye izindikimba zokulawula, vikela izimali zakho, futhi kudinga idiphozithi ephansi ukuze kuqalwe i-akhawunti.
Mayelana nobubi, I-FXOpen inezinketho ezilinganiselwe zokuhoxisa kanye nediphozithi. Okwamanje, futhi ikhawulelwe emazweni athile angafaki i-US.
Ukuphepha & Ukuphepha Kokusebenzisa i-FXOpen
Ukuqinisekisa ukuthi izimali zakho zisezandleni eziphephile, I-FXOpen ilawulwa ngokuqinile yi-FCA esezingeni eliphezulu, ehlanganiswa yi-FRN:589202 UK. Zonke izimali zamakhasimende ayo nazo zigcinwa kuma-akhawunti ahlukene ezikhwameni zokusebenza. Izimali zabadayisi, naphezu kobuzwe babo, avikelwe inani elingu-£50,00 elivela ku-FSCS ngesikhathi esifanayo. Iwukuvumela amaklayenti ayo ukuthi afinyelele ezezimali zawo lapho kwenzeka izenzakalo ezingalindelekile.
I-FXOpen isebenza emazweni afana ne-United Kingdom, Australia, Nevis, I-Saint Kitts, futhi inabamele kwamanye amazwe.
I-FXOpen iphakathi kwabathengi abathembeke kakhulu namuhla. Ihlinzeka ngezinhlobo zama-akhawunti ezimbalwa ezifanela abadayisi abahlukene, futhi isengenye yezintandokazi ngenxa yediphozithi yayo encane kanye nokuhoxiswa kwayo.
Isiqephu esedluleUkubuyekezwa kwe-XM Broker – Kumele Ufunde! Ingabe i-XM yiBroker Forex Broker?
Isihloko esilandelayoIDWma AMMA Cross Forex Trading Strategy